Abavelisi base China abahlaziyiweyo beKofi ephathekayo kunye nabathengisi | Nciphisa
Kutheni le nto kusiliwa kubaluleke kangaka?
Kukho izizathu ezibini: ukutsha kunye nokukhupha.
Nokuba umgubo wekhofi owuthengayo ugcinwe nge-nitrogen, ngalo mzuzu uvula itywina, iya kuqala ukuba ibe ne-oxidized. Ikofu iphantsi kwaye yahlulwe yaziikomityi. Emva kokulinda isiqingatha seyure, gaya ikofu entsha yokuthelekisa. Umahluko phakathi kwezi zimbini uza kothusa: Emva nje kwemizuzu engamashumi amathathu, ivumba lekomityi yokuqala yekofu liye lanyamalala.
Indibaniselwano yevumba kunye nencasa yincasa yekofu epheleleyo. Kungenxa yoko le nto ukutya kuya kuphela xa ugula. Ivumba lomgubo wekofu ophambi komhlaba liza kulahleka, liswele "amandla".
Nokuba uyathanda iimbotyi zekofu ezijijekileyo okanye ezikhanyayo, okanye usebenzisa uxinzelelo okanye ukucoca idrip, ukutyala imali kwi-grr elungileyo yokuseta yeyona ndlela ilula yokuphucula umgangatho wekofu yakho.
"Nciphisa" i-grinder yekhofi ezayo!
Isipaji esisebenza ngesandla esisebenza ngombane sinokuhlangabezana neemfuno zakho zemihla ngemihla zekofu, songe ixesha kunye nomzamo, kwaye sinokukhupha ikofu yeencasa ezahlukeneyo. Kwangelo xesha, iyaphatheka. Unokwenza ikomityi yekofu ngokwakho xa useluhambeni okanye kuhambo lweshishini. Olona phawu lubalulekileyo lwe-grinder elungileyo yekofu kukucoceka kunye nokufana kokuguba. Inkampani yethu iphuhlise into yokuphatha ikofu yombane entsha. Isebenzisa isiseko sokusila seceramic esitsha kunye nesakhiwo esisengqiqweni kwaye sinokuguba kakuhle kwaye ngokulinganayo. Umgubo "ubalasele" phakathi kweentsimbi zekhofi ezifanayo. I-grinder yethu yekhofi iphumelele iimvavanyo ezininzi, kwaye umgangatho wemveliso unokuqinisekiswa.
Isixhobo esihle sokusela ikofu, sikufanele oko!
Egqithileyo Ukubaluleka kwetyuwa kunye nepepper Grinder
Okulandelayo: Isicoci seKofi esineSimbi engenasiphelo
Ngokuzenzekelayo Burr Coffee Grinder
IBurr Blade Ikofu yokusila
Isandla seCeramic Grinder Hand
Umbane weCeramic Burr Coffee Grinder
Isilelo seKofi Mill
Isandla seMill Grinder yeKofu